Rock volon'ondry biraom-teknolojia fanorenana - Li Pu Energy insulation fahavaratra Material Co., Ltd.
Mafana insulation Accessories
Extruded board teknolojia fanorenana
Polystyrene board teknolojia fanorenana
Rock volon'ondry board teknolojia fanorenana
Rock volon'ondry rindrina ivelany insulation rafitra fanorenana tena ilaina
1. Alohan'ny fanorenana, fanorenana drafitra manokana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny hafanana angovo fiarovana ny injeniera tetikasa dia tokony ho vonona araka ny fepetra takiana amin'ny famolavolana sy fitsipika ity sy ny fenitra ara-teknika ilaina, sy ara-teknika sy ny famborahana matihanina ara-teknika dia tokony homena fampiofanana ny mpiasa amin'ny fanorenana.
2. Ny fanorenana ny vatolampy volon'ondry birao ivelany insulation mafana ho an'ny angovo rafitra fiarovana sy ny mafana insulation tetikasa dia natao araka ny mahay sary fanorenana sy antontan-taratasy famolavolana ny drafitra fanorenana manokana nankatoavina ho an'ny fiarovana sy ny mafana angovo insulation tetikasa.
3. Ny orinasa famokarana ny vatolampy volon'ondry birao ivelany rafitra insulation dia hanana matihanina mba hanome tari-dalana eo amin'ny-toerana nandritra ny dingana fanorenana, ary hiara-miasa amin'ny fananganana vondrona sy on-toerana fanaraha-maso mba hanao asa tsara eo amin'ny fanaraha-maso ny kalitao fanorenana.
4. Fitaovana dia tsy maintsy amin'ny teny anglisy ary nanaiky araka ny fepetra arahana, habetsahana sy ny hatsaran'ny alohan'ny hidirana ao amin'ny trano fanatobiana entana, ary tokony izany ny mpiasa manokana. Efa voarara ny manangona an-kalamanjana. Rindrina lamba volon'ondry vatolampy tokony hihaviana hanaovana birao misy tongony.
5. Ny fanorenana dia hihaona ny fepetra manaraka ireto:
(1) ny fitsaboana ny fototra sy ny rindrina simenitra leveling sosona feta sy ny fametrahana ny faritra nandinika lalina no vita.
(2) ny fitaovana ilaina sy ny asa fanorenana fitaovana fiarovana dia tokony ho vonona.
(3) fanorenana torolalana manokana dia tokony ho nanangana mafy, nandinika Nahafeno fepetra fiarovana. Torolalana sy ny tsato-kazo tsato-kazo marindrano sy ny rindrina, dia tokony hihaona zorony Heba fepetra ny fanorenana.
(4) ny fototra manda dia ho mafy orina sady mandimandina, ho etỳ ambonin'ny no ho maina, tsy hisy famoretana, foana amponga, hoe: Vahao na fanjian, simenitra rihitra leveling sosona fatorana hery, flatness sy vertility tokony hihaona (fanorenana fandravahana injeniera kalitao fanekena fepetra arahana ) GB50210 eo amin'ny olon-tsotra ny fandalorana injeniera kalitao takiana.
6. Rock volon'ondry board insulation ivelany nandritra ny vanim-potoana ny fanorenana, ary ny fanorenana amin'ny ahitra-fakany ambaratonga tsy ho fanorenana rehefa hafanan'ny Ambient lalina noho 5 ℃. Tsy azo atao ny fanorenana amin'ny Gale toetr'andro, orana sy ny oram-panala Weather ambony kilasy 5. nandritra sy taorian'ny fanorenana, fepetra mahomby tokony horaisina mba hisorohana ny fahasimban'ny orana sy ny masoandro ny hatsiaka, ary tokony ho ara-potoana sosona fiarovana. Raha misy rotsakorana tampoka nandritra ny fanorenana, fepetra tokony ho raisina mba hisorohana ny ranonorana avy nanasa mihoatra ny fefy; Winter fanorenana dia tokony ho araka ny fitsipika manan-danja mba handray fepetra antifreeze.
7. Talohan'ny-faritra lehibe fanorenana, dia tsy maintsy hanaraka izany fitaovana, ny fomba fanorenana sy ny teknolojia mba hanao ny santionany ampiantany vato ny toerana, ary ny fanorenana azo tanterahina raha tsy aorian'ny manan-danja ny fandraisana ho mpikambana ny antoko.
8. Rehefa mampiasa vatolampy volon'ondry biraom ho an'ny fanorenana, mpandraharaha dia tokony hanao tsara ny asa fiarovana ny lahatsoratra, hanao asa tsara eo amin'ny asa fiarovana ny fahasalamana, ary hanongilan-tsofina amin'ny fanorenana toerana azo antoka.
9. Ny fitaovana ilaina ho an'ny biraom-volon'ondry vatolampy insulation ivelany rafitra dia tsy maintsy alefa any amin'ny rafitra fitiliana mahafeno fepetra ho an'ny fizahan-toetra, ary mety ihany no azo ampiasaina rehefa avy mandalo ny fitsapana.
10. Ny vatolampy dia tokony ho volon'ondry birao napetany amin'ny tapa-kazo na hevitra lakaoly fomba fomba, ny faritra ny lakaoly coating tsy tokony ho latsaky ny 50%. Rehefa avy vatolampy volon'ondry board amin'ny adhesive, no tokony voalohany insulation biraom ambany ary apetaho amin'ny ahitra-fakany ambaratonga, vato volon'ondry birao dia tokony ho nanaraka ny marindrano tari-dalana transverse nametraka avy ambany ny ambony, ary tokony ho raisina mba hampielezana sy Anchorage, miantehitra mafy tonon-taolana dia tokony ho ara-boajanahary, elanelana eo amin'ny lovia, dia tsy ho lehibe noho ny 2 mm, toy ny seam 2 mm ny sakany, hafanana fiarovana ara-nofo mameno fanodinana, mifanila tontonana tokony ho maoderina, isam-ponina maha samy hafa ny takelaka, dia tsy ho lehibe noho 1.5 mm.
11. rehetra ny fantsona sy ny singa izay afaka tonga vatolampy volon'ondry birao ny alalan 'ny manda dia ho feno fitaovana mitovy amin'ny fivoahan'ny ary avy eo dia tsaboina amin'ny tantera-drano tombo-kase.
12. Raha hita fa latsaka ny veneer sosona eny nandritra ny dingana fanorenana, dia ho ara-potoana nampikambana na ferana amin'ny alalan'ny anchoring notorotoroiny avokoa, ary ara-potoana fanorenana ny sarona sosona ivelany ho entiny avy.
13. Ny fanorenana coating dia hihaona ny fepetra takiana manaraka ireto:
(1) araka ny vatolampy dia napetany volon'ondry birao, ny fandalorana ambonin'ny ny birao dia ho tsaboina. Ny manerana manontolo dia norakofako amin'ny Stainless vy spatula (hatevin'ny: 1 ~ 1.5mm) ka nanery an ambonin'ny fibre ny harambato volonondry birao.
(2) ny lalotra dia voaendrika mifanaraka tsara ny vokatra toromarika fandidiana. Ny vonona adhesive masoandro dia tsy mivantana ka ampiasaina ny ao anatin'ny 2h.
(3) ny fandalorana sosona dia mizara ho roa sosona. Ny hatevin'ny sosona voalohany ny fandalorana Mametaka 2 ~ 3mm. Ny sosona voalohany tokony voalalotra amin'ny Stainless vy serrated spatula, ary avy eo Voalaminay amin'ny spatula lehibe, ary avy eo ho any amin'ny fitaratra nanery fibre harato lamba raha lena. Rehefa kely ny fandalorana Mametaka maina sy mafy ny ho nanohina ampy, ny faritra Anchorage tokony hapetraka. Ny voalohany sosona ny fandalorana rihitra dia kely maina, ary ny faharoa ny fandalorana rihitra sosona azo naorina tamin'ny hatevin'ny ny 2mm, ary ny sakan'ny ny fandalorana azo rava tanteraka hitsena ny famolavolana fepetra.
(4) ny fametrahan 'ny tambajotra lamba dia Voalaminay sy straightened, ary ny mpanorina sy ny perpendicularity ny Angle ny Yin sy Yang dia ho foana. Any no hisy tonon-taolana eo am-pofoany ny ambony sy ambany ary ny lafiny havia sy havanana ny tambajotra lamba, ary ao am-pofoany sakany dia tsy ho latsaky ny 100mm; Glass fibre harato, ka tsy mba mivantana nametraka eny ambonin'ny vatolampy biraom-volon'ondry, na izany no ho hita, na, no hataonao nifanindry maina.
(5) ny faritra Anchorage dia hapetraka araka ny toerana takian'ny ny endrika, ka ho drilled amin'ny percussion fandavahana na herinaratra kanonta. Ny halalin'ny ary atsofony dia ho lehibe noho ny Anchorage 10mm ny halaliny. Nandritra ny fametrahana, ny Anchorage fantsika dia nandondòna tao an na screwed any an-rindrina.
Javatra amin'ny teny manokana
1. mihaino ny orana, fa tsy amin'ny andro orana fanorenana.
2 Fa mangatsiaka dia tsy maintsy tonga ao amin'ny hamandoana-porofo sosona, ao amin'ny hafanana ambany fepetra manokana, miaraka amin'ny tsy resin vatolampy volon'ondry insulation, ny hamandoana-porofo sosona maintsy ho afo
3. ny mari-pana rehefa efa mihoatra noho ny sasany mafana, toy ny: 200 ℃, ny hafanana any ivelany dia tsy maintsy ampiana fiarovana mety fiarovana, mba tsy hahatonga ny vatolampy sy ny volon'ondry birao hatevin'ny hakitroky fiovana.
4. Ny manan-danja lehibe fitaovana hampiasa savaivony ny fiadanana rindrina vatolampy volon'ondry vokatra insulation, mihoatra noho ny 200 ℃, tandremo tsara ny ao an-tsaina foana fa ny vatolampy volon'ondry biraom-mpanamboatra ny hoe: amin'ny insulation fantsika, (manodidina ny 400 MM Heba) mitandrina.
5. Ny fitaovana, insulation fantsika sy ny fantsona izay mila ho Voaro afaka hanaiky coating mety ho tanjona manohitra ny harafesiny. Tsy tokony hisy tete azo. Mety hahazo vokatra tsara kokoa.
6. Rock Cotton vilia vokatra vita amin'ny raharaha ivelan'ny trano insulation dia mora ny milina dia tokony ho ampiasaina anaovan'ireo metaly na plastika wrapping, ary avy eo dia diniho tsara ireo mpiara toerana, seam tombo-kase, mila manampy colloidal tombo-kase, Wrap sosona stacking tsy latsaka eo an-toerana noho ny 100mm
7. Rehefa insulation zavatra apetraka amin'ny 90 diplaoma sy manana avo anankiray, ny insulation sosona vato dia tsy maintsy manana birao volon'ondry toerany Pin na fanohanana ny peratra, ny Heba tsy tokony ho mihoatra ny 3 metatra, mba hisorohana ny insulation antontan-kevitra any amin'ny raharaha ny hovitrovitra, rehefa sliding teo.
8. Mba hahatratrarana ny tanjona kely indrindra ny fahaverezan'ny hafanana, ny tonon-taolana ny vatolampy biraom-volon'ondry, ary nahatsapa ho akaiky dia tsy maintsy mifandray. Raha misy sosona maro amin'ny mafana insulation, ny hazo fijaliana tonon-taolana tokony manarona mba tsy namorona tetezana iray mafana.
Antsasaky ny fomba Industrial zaridainam-panjakana, Lanshan District, Linyi, Shandong Province, Sina
Copyright Linyi lipu insulation fitaovana Co., Ltd.